Sh Umal - Android app on AppBrain
All apps > Education > Sh Umal
by altaqwa technology
Tafsiirka Qur'aanka oo dhamaystiran halkan ka baro. Waxa uu kuu sahlayaa appkan in aad ka dhageysato casharada tafsiirka oo dhan. Waxaa akhriyey tafsiirkaan Sh M A Umal (Alle haka siiyo ajar iyo xasanaad ).
Waxaan ka shaqeynay appkan muddo wakhti ah waxaana ah alle mahadiisa in aan maanta khadka ku soo darno.
Waxaan hadda soo wadnaa Sh Cumar faaruuq iyo qaariga magaciisa layiraahdo Sh Cabdirashiid Sh Cali suufi insha allah
//Cabdirisaaq Maxamuud Jamac
Waxaan ku soo darnay.
1. wakhtiga casharka u soconayo oo la arki karo
akhriyey appkan cabdirashiid cabdirisaaq dhageysato dhamaystiran faaruuq hadda iyo jamac layiraahdo magaciisa mahadiisa maxamuud muddo qaariga shaqeynay soo suufi tafsiirka tafsiirkaan wadnaa wakhti waxaan xasanaad
aad ajar allaah allah iyo masha siiyo tafsiirka umal walaalayaal
ajar allaah allah idinka iyo mansha masha siiyo ugu umal
caawinkara codsi dhagaysiga dhibanahay dhinaca iishaqaynayay khaliif kheeyran tafsiirka waanu
Quraanka Karimka Soomaali
Abdirizak Hasan Kabadhle
More from altaqwa technology
the chicago brothers